वाइसिएल सुर्खेतको अध्यक्षमा पदम वन – Enayanepal.com
वाइसिएल सुर्खेतको अध्यक्षमा पदम वन
सुर्खेत, पुस २० ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सहायक संगठनका रुपमा रहेको योङ्ग कम्यूनिष्ट लीग (वाइसिएल) सुर्खेतको नयाँ कमिटी गठन भएको छ । विभिन्न माओवादी घटकहरुबीच एकता भएपछि बुधबार भएको माओवादी निकट युवाहरुको एकता भेलाबाट नयाँ कमिटी गठन गरिएको हो ।
नयाँ कमिटीको अध्यक्षमा यस अघि बरिष्ट उपाध्यक्षमा रहेका पदम वन निर्बिरोध निर्वाचित भएकाछन् । भने यस अघिका अध्यक्ष अम्मर चन्द जिल्लाको सह–इन्चार्ज भएकाछन् ।
यस्तै नयाँ कमिटीको बरिष्ट उपाध्यक्षमा खीम पाण्डे, उपाध्यक्षहरुमा पदम शाही, धनबहादुर वली, मानबहादुर राना निर्र्वाचित भएकाछन् । यस्तै सचिवमा रमेश परियार, सहसचिवहरुमा सागर भारती, राजु तामाङ र सन्तोष वि.क. निर्वाचित भएकाछन् ।
यसै गरी नयाँ कमिटीको कोषाध्यक्षमा नवराज कार्की चयन भएकाछन् । वाइसिएल सुर्खेतको अनुशासन आयोग प्रमुखमा दत्त बराल, लेखा समिति प्रमुखमा किरण श्रेष्ठ चयन भएकाछन् ।
यस्तै ५१ सदस्यीय कमिटीको सदस्यहरुमा विकास नेपाली, भूपेन्द्र खनाल, खीमबहादुर वादी, रामचन्द्र पुरी, पदम खनाल, तिलक वली, विकल थापा, प्रकाश थापा, सन्देश पुन, प्रेम खड्का, जगत नेपाली, सुर्प शाही, मानबहादुर परियार, हरि गाहा, रामचन्द्र वि.क., मानबहादुर राना, विक्रम राना, पदम राना, घनश्याम घर्ती, राजु पौडेल, डिलबहादुर खड्का, भिम बराल, पूर्ण बुढा, जय पुलामी, जनक थापा, अम्मर थापा, सूर्यबहादुर शाही, गणेश सलामी, भिमराज बस्नेत र चन्द्रकला राना लगायत रहेका छन् ।
एकता भेला माओवादी केन्द्र प्रदेश नं. ६ का सहइन्चार्ज कालिबहादुर मल्लको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पनन भएको हो ।